Shaqada: Yaa go'aaminaya wakhti dheer? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » Shaqo bixinta »Shaqooyinka: Yaa go'aaminaya wakhti dheeraad ah?
Shaqada: Yaa go'aaminaya wakhti dheer?
Cabbiraadda ay soo saartay Sarkozy, oo laga eryey Holland, oo ay dejisay Macron, canshuurta laga dhaafo saacadaha dheeraadka ah waxay sii wadi doontaa dhibaatooyinka codsigooda shirkadaha u dhexeeya loo shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha.
La wadaag FaahfaahintaPartager Suur Twitter
"Illaa iyo inta aan la bixin lacag-bixinta dheeraadka ah ee loo baahan yahay inay noqoto mid laga yaabo inay keento, sida ku cad Qodobka L. 8221-5 ee Xeerka Shaqaalaha, xayiraadda shaqo qarsan. »Ingram / Sawiroon / Ingram / Sawir-gacmeed
Su'aasha xuquuqda bulshada. flagship Cabbiraad Nicolas Sarkozy, bedello by François Hollande, cashuur dhaaf ah oo saacadaha dheeriga ah la soo gudbiyo taariikhda Madaxweynaha Macron, kuwaas oo uu sheegay in December 10 2018, in saacadaha dheeraadka lahaa "Lacag lagaa qaado canshuur la'aan ama khidmadaha 2019". Weli, waa in la bixiyaa. Laba go'aan oo dhowaan Maxkamadda Cassation waxay ku ansaxisay bixinta lacagta dheeraadka ah ee loo-shaqeeyayaasha kuwaas oo muujiyay inayan ku amrin. Garsooruhu wuxuu xusuusiyay in shaqaaluhu awoodi karo, xitaa xaaladahaan, inuu helo lacag.
Xaaladdan oo ah inta u dhaxaysa Mr. Rémi Y, la taliyaha shaqaale IT si uu u shaqayso hore, shirkadda Softteam Cadextan (oo horay Sungard Consulting), Maxkamadda Racfaanka ee Paris ayaa tiirisay maxkamadda shaqada qabtay by qofka shaqaalaha ah, ee meesha ka saaray inuu codsiyada callback dheeraadka ah ee ku saabsan in ka badan afar sano magdhawga inteeda kale iyo dhaawacyo shaqo suuq madow (FG: codsiyada total ahayd qiyaastii euros 100 000).
Rémi Y. bandhigi jadwalka sida maalinlaha ah ee macaamiisha loo shaqeeyaha ay waayo, kii uu soo dhexgalay wakiil Ilodanimada ah toban saacadood (h 8 30 in h 18 30) hal saac oo fasax qado, oo isna wuxuu ku sameeyey, sidaas laba saacadood oo dheeraad ah maalintii. Waxa uu gaadhsiiyo caddayn, amarada shaqada, taageerada jadwalka lagu dabaqi karo macaamiisha, warbixinta shaqada ah, warbixinta horumarka billaha ah, wararka dhaqdhaqaaqa billaha ah ee xisaab, xisaab saacadaha dheeraadka ah, ee emails iyo waraaqaha uu u soo diray in loo shaqeeyaha.
Xukunka "shaqo qarsoon"
Shirkadda Softam Cadextan ayaa ku jawaabtay in shaqaaluhu uu codsaday ugu horeeyay ee bixinta lacagta dheeraadka ah laba bilood ka hor inta uusan ka tegin. Waxay ogaatay in caddayntu ay ahayd mid aan qiimo lahayn, sababtoo ah waxay ka kooban tahay warbixinno iyo warbixino aan soo gudbineynin macaamilka ama e-mail loo diray. Ugu dambeyntii, loo-shaqeeyuhu wuxuu u qeexay shaqaaluhu dhawr qoraal oo uu u xilsaaray wakhtiga shaqada soddon iyo shan saacadood usbuucii, waqtiga dheeraadka ah ee la siinayo heshiis horay u leh kormeeraha.
Kadib maxkamadaynta warshadaha, Maxkamadda Rafcaanka ee Paris waxay si buuxda u ansixisay doodii loo-shaqeeyaha ahaa ee loo igmaday Mudane Rémi Y. Samaynta wakhti dheeraad ah oo ku saabsan awoodda maamulka ee loo-shaqeeyaha, shaqaaluhu uma baahna inay horay u dhigaan faashad.
SHAQADA LOOGU TALAGALAY: XANUMAHA AMMAANKA AMMAANKA